Abbootiin Gadaafi haadholiin Siinqee maaliif gara Maqalee imalan? - BBC News Afaan Oromoo
Abbootiin Gadaafi haadholiin Siinqee maaliif gara Maqalee imalan?
Abbootin Gadaafi haadholin Siinqee Kibxata waaree booda gara naannoo Tigraay magaala Maqaleetti imalaniiru.
Jila kana keessa walitti qabaa Gamtaa Abbootii Gadaafi Abbaa Gadaa Gujii kan ta'an Jiloo Maandhoo, Abbaa Gadaa Tuulama Goobana Hoolaa, Abbaa Gadaa Boorana Kuraa Jaarsoo, akkasumas Abbootiin gadaa biroofi haadholiin siinqee ni argamu.
BBC walin gaafif deebii kan taasisan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, Sababii gara Maqalee imaluun isaan barbaachiiseef dubbataniiru.
"Uummanni Tigraay uummata Oromoo wajjin waldhabbii hin qabu. Naannoo waraanni jiru, ijoolleen abbaa duulaa bakka itti kufte, bakka itti kuffifte, bakka itti wareegamte ilaaluu waan barbaadnef garas imallee jira. Namni naannoo miidhame ilaaluu deemummoo waa harkatti qabatee deema" jedhan.
Haaluma kanaan namoota sababa waraana naannoo Tigraayin miidhaman, daa'immanfi haadholiif gumaata midhaan gosa garaagaraa kuntaala 10,200 ta'u qabatanii deemu himan.
Deeggarsi kun qonnaan bultoota fi daldaltoota naannoo Oromiyaa keessaa gama Gamtaa Abbootii Gadaa Oromootin walitti qabamuusaas dubbatan.
"Rakkinni Oromiyaa keessas ni jirti. Haa ta'u malee rakkinni rakkina caala. Oromiyaan osuma buqqaatota heddu qabuu tokkummaa biyya kanaatiif jennee ardaalee jilaa jiranirraa walitti buusnee gumaata sana itti kennine" jedhan.
Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay gumaata abbootii Gadaafi Haadholii Siinqee harkaa fuudhuu kan himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa, dhimma nageenya naannichaa irratti hogganaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr Muluu Naggaa walin mari'achuu isaanii himan.
"Biyyi Itoophiyaa birmadummaashee kabachiistee hanga ammaa turtee jirti. Jarri kun immoo /TPLF/ bu'aa siyaasaaf jedhanii uummata walitti buusaa jiru. Darbanii naannoos walitti buusaa jiran. Badii irratti badii osoo hin ida'in uummatni Tigraay gara jiruf jireenya idileetti deebi'ee kallattii bulchiinsi yeroo kennun filannoo fulduratti adeemsifamus akka adeemsisan fi waa'ee nageenya Tigraay mari'anne" jedhan.
Ministira Haajaa Alaa duraanii, Obbo Siyyum Masfin eenyu?
Gama biraatin haala magaala Maqalee kan gaafanne Abbaan Gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa "sochiin jiru baay'ee dadhabaadha. Namni dukkaanasaa banatee sochiirra hin jiru. Kan cufatee taa'utu jira. Darbee darbee iddoo buna itti dhaabanitti qeerroon kun walgahee tataa'ee jira. Guutumaan guututti sochiin hagas mara sin quubsu" jechuun ibsan.
Gara fulduraattis abbootii amantaafi namoota bebbeekamoo naannichaa walin mari'achun naannichi akka tasgabbaa'uf akka hojjetan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa himaniiru.
Dhumarrattis yaalin mootummaa federaalaa fi hooggansa TPLF araarsuuf taasifame quubsaa akka hin turre himan Abbaa Gadaa Goobana Hoolaan.
Haala taajjabanis, "Warri araara deeme dhaqee ofirra dacha'e. Akkanatti nama hin araarsan. Biyyi sun taabotafaa qaba. Taabota san itti baasee 'lakkii dhiisaa wanna kana, waan biyyi marti jaalate jaaladhaa' jedhee irra oolee bula malee dhaqeetuma ofirra deebi'uun sirrii miti" jechuun ibsan.
Naannoo Tigraayiitti lola Sadaasa 04 bara 2020 sababii haleellaa humnoonni TPLF Raayaa Ittisa Biyyaa ajaja Kaabaa kana naannicha keessa buufatee tureerratti raawwatan hordofuun ture kan eegale.
MM Abiy Ahimad 'seera kabachiisuuf' jechuun Raayyaan Ittisaa biyyaa humnootii TPLF irratti tarkaanfii akka fudhatuuf ifatti ajaja dabarsan.
Isaan dura garuu waldhabdeen aangaa'oota TPLF fi bulchiinsa MM Abiy jidduu ture itti hammaachaa adeemuun dhumarra sadarkaa motummaan dfederaalaa lolatti akka seenu ta'ee irra gahame.
Erga lolli naannichatti eegalee kaasees hanqinni dhiyeessitii tajaajilee fi meeshaalee bu'uuraa mudachuu dhaabbileen gargaarsa namoomaa himunsaanii ni yaatama.
Kana malees namoonni dhibba hedduun lakkaa'aman ajeefamuufi kanneen miliyoonotaan lakkaa'aman bakka jireenyaasanii buqa'aniiru. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa 56,000 caalan daangaa qaxaamuruun gara Sudaan baqataniiru jedha odeeeffannoon UNHCR irraa argame.
Eggaa jilli abbootii gadaafi haadhoolii sinqee kunis sababii kanaatiin deeggarsa miidhaanii ummata naanichaatiif gummaachuuf gara sanatti imalan.